Banyere Anyị - Shenzhen Sicily Technology Co., Ltd.
Guzosie ike na 2006, Shenzhen Sicily Technology Co., Ltd. bụ onye na-emepụta ngwa ngwa nke lanarị na ebe obibi. Anyị bidoro na ọkụ ọkụ na 2016, mana anyị nwere ọtụtụ ihe ugbu a, gụnyere mbido ọkụ, ngwa ịlanahụ griin , maa ụlọikwuu tent, azu paaki na maa ụlọikwuu cookware set wdg.
Teknụzụ Sicily na-arụ ọrụ dị iche iche nke ịnye ndị ahịa ya ngwaahịa na ọrụ dị mma yana ịmekọrịta mmekọrịta ogologo oge site na mmekọrịta ọ bụla nke ndị ahịa. Iji mezuo ebumnuche a, anyị na-akwalite ma na-azụlite lanarị na ihe ndị anyị na-ama ụlọikwuu.
Ọhụụ anyị bụ iwu ụlọ ọrụ na-eguzosi ike na ụkpụrụ ya ka ọ na-eme ka ọ nyochaa ụzọ ọhụrụ nke uto na ihe ịga nke ọma na-edebe ahụmịhe ndị ahịa na afọ ojuju ndị ọrụ.
Kpụrụ nke Companylọ Ọrụ Anyị
Ofkpụrụ nke Sicily Technology bụ ntọala nke mmekọrịta anyị niile na-arụ ọrụ yana ndị ahịa anyị. Ọtụtụ ndị ahịa na-ekwu maka anyị na-ahụ ụkpụrụ ndị a ka ọ bụ isi sekpụ ntị mere anyị ji nwee ike ito eto kemgbe ọtụtụ afọ.
Ndị ọrụ anyị niile na-arụ ọrụ ọkachamara ma hụ na ndị ahịa ọ bụla nwere ahụmịhe kachasị mma. Dịka ndị ọkachamara, anyị ji oge gị akpọrọ ihe, anyị na-agba mbọ ịnye ngwaahịa na ọrụ anyị n'oge kwesịrị ekwesị yana dịka atụmanya gị.
Vlanahụ Fire Starter, Inflatable ụlọ Tlọikwuu, Xtm ụlọ Top tent, Na-adịgide Adị n'doorlọikwuu, Starter Magnesium oku, Gear Mberede Mberede,